Aqoonyahan Mustafe Barud Oo Maanta Xoriyadiisa Dib U Helay | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Aqoonyahan Mustafe Barud Oo Maanta Xoriyadiisa Dib U Helay
Mustafe Barud oo Maanta Xoriyadiisii Dib Ayuu U helay Ayaa muddo 6 Maalmood ah ku xidhnaa Xabsiga Dhexe ee ku yaala magaaladda Hargeysa , iyadoo aan Ilaa hadda wax maxkamad ah la soo taagin loona sheegin sabaha lagu xidhay.
Ma ahana Wax cusub in Muwaadiniin La iska Xidho, Lana soo daayo isagoon wax cadaalad ah la hor keenin, iyadoo Arintaasina ay horay u dhaawacday Dimuqraadiyadda dalka ka jirta.
Waxaanad halkan hoose ka akhrisataan qoraal uu Mustafe Barud Barta facebook-giisa ku soo qoray markii xabsiga laga sii daayey kaasoo u dhignaa sidan:—-
” Galab wacan iyo War farxad leh asxaabta!
Aan ugu horeyn u mahad celiyo Alle oo amarkiisu yahay ka kaliya ee aan baaqan, ciddina baajin karin, laakin aynu Aadame ahaan, sabab uun u yeelno waxa qoraalkiisa ku dhaca. Mar labaada aan u mahad celiy dhamaan akhyaartii, axbaabtii, ehelkii, asxaabtii iyo ciddkaste oo kaalin ka qaadatay soo dayntaydii iyo dhacdaddi xadhigayga.
Mar saddexaad aan si gaara ugu mahad celiyo asxaabtii tirada badnayd ee aan kusoo bartay ayaamihii koobnaa ee aan jeelka ku jiray. Runtii waxa ahaayeen akhyaar aanan ilaabi doonin. Waxa ay dhamaystireen si toos ahna u matalaayeen bulshada inta aan codkoodu ina soo gaadhiin ama aynaan fursadd u siin in aynu waydiino sababta ay xoriyadooda u siistaan qiimaha jaban!!!!!.
Mar afraad ii saamaxa in aan u mahad celiyo saraakiishii, askartii, xeer ilaalintii, garsoorkii iyo dhamaan bahda amniga, caddaaladda iyo garsoorka sidii quruxda badnayd ee ay iila dhaqmeen intii aan la joogay.
Ugu danbayntii saaxiibayaal; waxa qudhiya ee aan ilaa hadda idinla wadaagi karaa waa in aynu sii xoojin doono mihnadeenii siyaasadeed, xoriyatul qawl iyo saxaafadeed. Waa in aynu mar walba la jiri doono runta, sharciga, iyo caddaaladda xataa hadii ay tahay midd inaga in taabanaysa!
Waad mahadsantihiin dhamaantiin! “
Aqooonyahan Mustafe Barud